Suunka Wareejinta Suunka wax lagu qaado waa suunka wax lagu raro ee nidaamka gudbinta suunka (oo badanaa loo gaabiyo suunka qaada). Nidaamka xamuulka suunka waa nooc ka mid ah noocyada kala duwan ee nidaamka rarka. Nidaamka suunka xambaara wuxuu ka kooban yahay laba ama in ka badan oo isweydaarsi ah (mararka qaarkoodna loo yaqaan durbaanno), oo leh wareeg aan dhammaad lahayn oo qaada qalabka dhexdhexaadka ah - suunka gudbiyaha - oo ku meeraysta iyaga. Hal ama labadaba wicitaanada ayaa la xoojiyaa, horay u sii dhaqaajinaya suunka iyo walxaha ku jira suunka. Jilibka tamarta leh waxaa loo yaqaan 'pulley drive' halka ...
The stator iyo rotor, inta badan loo isticmaalo mashiin sabeynta ee taxanaha XJK, taxane XJQ, taxane SF, taxane BF, taxane ah KYF, taxane XCF, taxane JJF ah, taxane BS-K. Rotor iyo stator ee mashiinka sabeynta waxaa inta badan ka kooban gelin qalfoof bir iyo caag xiran-u adkaysta. Dhexgalka qalfoofka birta waxaa laga sameeyaa goynta ololka horumarsan ka dibna si sax ah ayaa loogu dhejiyay heerarka nidaamka adag. Awoodda iyo isu dheelitirka waxqabadka gelinta qalfoofka waxaa lagu damaanad qaadayaa iyadoo la dheellitirayo ogaanshaha ...
Qalabaynta Haydarooliga & Isku-xidhka Degdegga ah & Adapple-Lock Adapter & Tubbada Rubber Haydarooliga
Qalabka loo yaqaan 'Staple & lock adapters adapters' Arex wuxuu diiradda saarayaa gaaritaanka heer sare ee naqshadeynta, soo saaridda iyo bixinta xalalka gudbinta dareeraha, qaybaha iyo qalabka la xiriira ee loogu talagalay codsiyada hidda sare ee cadaadiska sare leh. Ku soo koobay tan gudaheeda, waa takhasusle, soo saare qalabka loo yaqaan 'adapters adapters' iyo gaasaska kubbadda oo si ballaaran loogu adeegsado howlaha macdanta dhulka hoostiisa. Isku xirnaanta istaroogga ayaa ah qayb muhiim ah oo ka mid ah wareegga hawo-socodka ee macdanta waxayna leeyihiin rikoodh la xaqiijiyay oo ah inay yihiin xulashada ugu fiican ee c ...
Dhamaan suufkeena waxaa loogu talagalay dadka isticmaala dhamaadka maskaxdeena, iyadoo diirada la saarayo tayada iyo wax soo saarka. Noocyada suufka 'suufka' waa inay si fiican ugu habboon yihiin kabahaaga raadadka si looga hortago dhaqdhaqaaqyo aan loo baahnayn oo u horseedi kara isku-uruurinta qashinka, taas oo soo bandhigi karta culeysyo suufkaaga ah oo keenaya adkeysi wanaagsan. Isku xirnaansho qumman ayaa sidoo kale macnaheedu yahay buuqa shaqada ka aamusan. Waxaan bixinaa pads polyurethane track iyo pads track caag loogu talagalay macaamiisha isticmaalaya, kuwaas oo ay leeyihiin xirmo weyn u adkaysta iyo daxalka diidmada ...
The stator iyo rotor, inta badan loo isticmaalo mashiin sabeynta ee taxanaha XJK, taxane XJQ, taxane SF, taxane BF, taxane ah KYF, taxane XCF, taxane JJF ah, taxane BS-K. Stator iyo rotor waa qaybaha dhexe ee mashiinka sabeynta, kuwaas oo inta badan lagu dabaqo faa'iidada biraha ama biraha. Polyurethane stator iyo rotor waxay ka tirsan yihiin nooc ka mid ah waxyaalaha u adkeysanaya mashiinka sabeynta oo leh waxyaabo badan, maxaa yeelay polyurethane waxay leedahay awood sare sida balaastigga iyo sida laastikada oo kale sida caagga. Maaddooyinka khaaska ah ee isku dhafan ...
Alaabada Rubber & Balaastikada loo habeeyay
Ka-habeynta u-adeegsiga caagagga iyo alaabada caagga ah Nidaamka caadiga ah ee sameynta wax soo saarka caagga ah sida hoos ku xusan https://www.arextecn.com/uploads/66f24654.mp4 Qalabka ceeriin-isku-darka isku-darka isku-darka iyo qaab-xumada ayaa qaabeeya farsamooyinka farsamooyinka kala duwan ee caagga ah walxaha sida ka hooseeya wax taaj oo kale duritaanka; (qaybo balaastig ah) (dhalooyinka caagga ah) Qaadashada caaga; (filim caag ah oo qaabeeya) Extrusion; (biibiile caag ah) Khibrad shaqo Waxaan kor u qaadeynaa fikradahaaga inay ku rumoobaan tijaabada dhexdeeda ...
Sifee Qalabka Mashiinka Saxaafadda
Warshadaha AREX waxay soo bandhigaan waxyaabo badan oo ka mid ah qalabka wax lagu qoro ee loo yaqaan 'filter filter' si loo kordhiyo kala duwanaanta nidaamka saxaafadda miiraha. Mashiinka saxaafadda sifeeyaha waxaa loo isticmaalaa dareeraha / shaqada kala-go'idda adag. Miirayaasha cadaadiska waxay u adeegsadaan kala sifeynta cadaadiska inay kala saaraan dareerayaasha iyo adkayaasha, taas oo isdabajoogga lagu shubo saxaafadda miiraha oo uu ku fuuq baxo cadaadiska. Asal ahaan, shaandheeye kasta oo saxaafadeed waxaa loogu talagalay iyadoo loo eegayo cabirka iyo nooca slurry ee u baahan in la fuuqbaxiyo. Afarta qaybood ee ugu waaweyn ee saxaafadda miiraha lagu daro ...